अमेजन अपील सेवा, अब तपाइँको खाता पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ अमेजन खाता अपील सेवा प्रदायक
त्यहाँ ई-वाणिज्य परिदृश्य मा एक कट्टरपन्थी परिवर्तन भएको छ। जे होस्, जो सब भन्दा चाँडो शुरू गरीयो अझै पकाएको व्यापार को लाभ प्राप्त गरीरहेछन्। अमेजन एक ती प्लेटफर्महरु हो कि अनलाइन शपिंग को अग्रणी छ। द्वारा एक सेवा शुरू भयो Jeff Bezos सुरुमा किताब बेच्न थाले। र, तब अन्य विक्रेताहरु लाई पनि स्वागत छ। यो मानिसहरु को लागी बिभिन्न वर्गहरु मा बिभिन्न उत्पादनहरु बेच्ने को लागी एक खुल्ला बजार भयो।
यदि तपाईले अमेजनलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईलाई लाग्नेछ कि यो उत्पादनहरूको लागि खोज इन्जिन जस्तै छ। योसँग कुनै पनि प्रकारको ग्याजेट वा उत्पादन छ जुन कसैले कल्पना गर्न सक्थ्यो। अमेजन कुनै पनि चीजको लागि एक स्थानको रूपमा सेवा गर्दछ। जे होस्, यो प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित विक्रेताको विशाल बहुमतले हासिल गरेको हो। यसका बारे ग्राहक पक्षका धेरै थोरै व्यक्तिलाई थाहा छ। तर, यदि तपाईं विक्रेता हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा छ प्रतिस्पर्धाको मात्रा अहिले छ।
र, राम्रोसँग हुने सबै थोकको साथ, केहि व्यक्तिहरू पहिले लाभहरू लिन चाहन्छन्। केही ग्राहकहरूले प्लेटफर्म र विक्रेताहरूको शोषण गर्ने प्रयास गरे जसले कम समयमा बढी बिक्री प्राप्त गर्न चाहन्थे। यसले अमेजनले नियम र नियमहरू उनीहरूका ग्राहकहरू साथै विक्रेताहरूमाथि थोपायो। तर, यो विक्रेता पक्ष हो जुन प्रायः निलम्बित हुन्छ किनकि तिनीहरू गुणस्तरीय छन्। र, यदि तिनीहरू त्यसो गर्न असफल भए वा कुनै अनावश्यक तरिका प्रयास गरे भने प्लेटफर्म तिनीहरूको खाता निलम्बन गर्न उत्तरदायी छ। यो अवस्थामा, एक आफैले अपील गर्न सक्दछ तर अमेजनको अपील सेवा खोज्न आदर्श हुन्छ। किन? किनभने तपाईको खाता कम समयमा पुनः सक्रिय हुने सम्भावनाहरू पहिलो दृष्टान्तमा धेरै नै छन्।
अब अमेजन अपील सेवा र विक्रेता खाता निलम्बनको बारे तल जान्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: के अमेजन अपील सेवाहरू २०२१ मा प्रभावकारी छन्?
के म एक अमेजन अपील सेवा बिना मेरो बिक्रेता खाता पुन: सक्रिय गर्न सक्छु?
यो एक धेरै सामान्य प्रश्न हो जुन अमेजन विक्रेता समुदायमा सोधिन्छ। मानिस जसले अमेजन अपील सेवा मार्फत सेवाहरू प्रदान गर्छन्, तपाईँ र म जस्तो मानिस हुन्। यो तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ कि होइन भन्ने बारे होईन तर यसको प्रभावकारिताको बारेमा हो। हामी एक अमेजन अपील सेवा हो र हामी जान्दछौं कि यो कुनै रकेट विज्ञान छैन। यद्यपि, प्रभावकारी र सटीक हुनु भनेको तपाईंले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सर्वप्रथम, अमेजनले अपील कसरी गर्ने बारे निर्देशनहरू प्रदान गरेको छ। र, यदि तपाईं पर्याप्त विश्वस्त हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्।
तर हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले यो मुद्दा पहिले बुझ्नु पर्छ। लेख्दै अमेजन अपील पत्र मुश्किल छैन तर तपाईंले समस्या बुझ्नु पर्छ र यसको समाधान गर्न आवश्यक समाधानको साथ आउनु पर्छ। आदर्श रूपमा, जब अमेजनले विक्रेता खातालाई निलम्बित गर्छन्, तिनीहरूले विक्रेतालाई सूचना पठाउँछन्। यस अधिसूचनामा, उनीहरूले खाता किन निलम्बित भएको कारण उल्लेख गरे। यदि तपाइँ यसलाई बुझ्नुहुन्छ भने, अमेजनलाई पत्र पठाउने प्रयास गर्नुहोस् कि तपाइँ यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई सटीक हुनै पर्छ र मुद्दा बुझ्नु पर्छ। र अन्तिम तर कम्तिमा होइन, नडराउनुहोस्।
र, यदि तपाईं यसलाई मात्र आउटसोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक अमेजन अपील सेवा भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। म तपाइँलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि यो तपाइँको लगानी लायकको छ विशेष गरी जब तपाइँ निलम्बनको समयमा दैनिक व्यापार गुमाउनुहुन्छ।
अमेजन विक्रेता खाता निलम्बन पछि कारणहरु
प्लेटफर्ममा बढ्दो उत्पादनहरूको संख्याको साथ, किन कारणहरू निलम्बन हुन सक्छ स of्ख्या पनि बढ्छ। किन? किनभने त्यहाँ एक भन्दा बढि तरिका विक्रेताहरू उल्लंघनमा हुन सक्छन्। र यति ठूलो समुदायको साथ, यो अडिग छ कि त्यहाँ केहि बिन्दुहरूको सट्टा सूची हुनुपर्दछ। त्यसकारण तल हामीले अमेजन विक्रेता निलम्बन पछाडि केहि साँच्चिकै सामान्य कारणहरू उल्लेख गरेका छौं:
बहु खाताहरू: यदि तपाईंसँग अमेजनमा बहु विक्रेता खाताहरू छन् भने सम्भावनाहरू तपाईंले निलम्बन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अमेजनले प्रति व्यक्ति एक विक्रेता खातालाई अनुमति दिन्छ। एआई एल्गोरिथ्म तपाईंको प्रमाणहरू जाँच गर्न सक्षम छ। र, यदि यो अर्को खातासँग मिल्दो छ भने, एकले निलम्बन स्ट्राइक प्राप्त गर्न सक्दछ र अमेजन अपील सेवा आवाश्यक पर्न सक्छ।
अनुपयुक्त लिस्टिंग: अमेजन द्वारा निर्देशन अनुसार, त्यहाँ केहि उत्पादहरु छन् जुन एक प्लेटफर्ममा बेच्न सक्दैन। यो देश विशेष हुन सक्छ वा केवल प्लेटफर्म भर, अमेजन द्वारा प्रतिबन्धित हुन सक्छ। उदाहरणका लागि भारतमा वयस्क खेलौना बेच्न निषेध गरिएको छ र त्यसैले कसैलाई पनि ती बेच्न अनुमति छैन। र, यदि तपाईं तिनीहरूलाई अमेजनमा बेच्ने पक्राउ पर्नुभयो भने तपाईंको खाताले एक निलम्बन अपील प्राप्त गर्दछ।
तपाइँको वेबसाइट को विज्ञापन: अमेजनले उनीहरूको वेबसाइट भएको विभिन्न ब्रान्डका बिभिन्न उत्पादनहरू बेच्न अनुमति दिनेछ। तर, यसले उनीहरूको ई-कमर्स प्लेटफर्मको विज्ञापन गर्न अनुमति दिदैन। यदि तपाइँ यो गरिरहनु भएको छ भने तपाइँलाई अमेजन अपील सेवा चाहिन सक्छ।
Inauthentic वस्तु सूचीबद्ध गर्दै: यदि ग्राहकहरूले तपाईंको उत्पादलाई अनाहुतको रूपमा सूचीबद्ध गर्दछ भने तपाईंको खाता निलम्बित हुन सक्छ। अमेजनमा यति धेरै लिस्टिंगहरू छन् जुन दावी प्रमाणिक छ तर छैन। यदि तपाईंको उत्पादनको बारेमा यो केस छ भने म तपाईंलाई यसलाई बेच्न सल्लाह दिन्छु।
नक्कली वस्तु सूचीबद्ध गर्दै: यो एक एक ब्रेनर हो, केहि नक्कली बेच्न केवल अवैध छ। अमेजनले प्लेटफर्ममा सूचीबद्ध भएका सबै उत्पादनहरूको लागि आफैलाई विश्वसनीय समझे। यदि तपाईं त्यस्तो हुनुहुन्छ जो केहि बेच्दै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई लागी नक्कली लाग्छ भने उत्पादनको बारेमा आवश्यक डाटा प्राप्त गर्नुहोस्। र, यदि सम्भव छ भने मात्र बिक्री रोक्नुहोस् जबसम्म तपाईं स्पष्टता प्राप्त गर्नुहुन्न।
सुरक्षा गुनासोहरू: सुरक्षा नियमहरु आउँदा अमेजन धेरै विन्दुमा हुन्छ। यदि तपाइँको उत्पादन ले कुनै पनि संयोग द्वारा उल्ल .्घन गर्दछ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई ठीक गर्नुहुन्छ वा यसलाई बेच्नुहोस्।
प्रतिबन्धित छविहरू: त्यहाँ धेरै प्रकारका हुन्छन् जब यो प्रतिबन्धित छविहरूको लागि आउँदछ। यदि तपाईंले एक छवि पोस्ट गर्नुभयो जुन प्लेटफर्मको लागि उपयुक्त देखिँदैन भने यसलाई बन्द गर्नुहोस्। साथै, कसैलाई अरूको उत्पादनको छवि प्रयोग गर्न अनुमति छैन। यो विक्रेता निलम्बन पछाडि सबै भन्दा सामान्य कारणहरू मध्ये एक हो। हामीले प्राप्त गरेका धेरै जिज्ञासाहरू यो एक घटनाको सम्बन्धमा छन्। विक्रेताहरूले अक्सर छविहरू प्रयोग गर्छन् जसको लागि उनीहरूको अनुमति छैन। यदि तपाइँ यो गरीरहनुभएको छ भने रोक्नुहोस्, यसको मतलब तपाइँ IP नीतिहरू उल्ल policies्घन गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई अमेजन अपील सेवा चाहिन्छ।
प्रयुक्त वस्तु बेचियो: अमेजनले प्रयोग आइटमहरू बेच्न अनुमति दिँदछ तर नविकरणको कोटीमा। यदि तपाइँ नयाँको रूपमा प्रयोग गरिएको आइटम बेच्दै हुनुहुन्छ भने खराब ग्राहक समीक्षाले तपाईंलाई निलम्बनको घेरामा लैजान सक्छ। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले बेच्ने सबै चीज एक हावाको रूपमा ताजा छ।
म्याद सकिएको चीजहरू: अमेजन पनि खराब चीजहरूका लागि घर हो। अमेजन सामान्यतया ग्याजेटहरूको लागि चिनिन्छ तर यसले अन्य उत्पादनहरूको भीड पनि बेच्छ। यदि तपाईं म्याद सकनुभएको उत्पादन बेच्दै हुनुहुन्छ भने त यो ठूलो रातो झण्डा हुन सक्छ। तपाईंले वितरण गरिरहनु भएको उत्पादनहरूको जाँच राख्नु पर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ अमेजनलाई कुनै वैध व्यवसायको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो पुनर्स्थापना प्राप्त गर्न सम्भव छ तर त्यस्ता गतिविधिहरूले कार्यलाई अमेजन अपील सेवाको लागि कठिन बनाउँदछ।
बस्तु बिक्री गरिएको छैन वर्णन गरिएको रूपमा: उत्पाद विवरण धेरै ठूलो मुद्दा हो। स्पष्ट रूपमा, एक कडा प्रतिस्पर्धा लड्न छ। अझै, यो सर्टकर्ट खोज्न कुनै कारण छैन जब प्लेटफर्म अत्यधिक तिरस्कार गर्दछ। धेरै विक्रेताहरु उत्पादको क्षमताहरु लाई वर्णन गर्न को लागी धेरै बढाइ बढाइएको वर्णन गर्दछ। यदि तपाईं यसको लागि नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पूर्णतया तपाईंको गल्ती हो। एक विवरण भनेको तपाइँको उत्पादनलाई सब भन्दा सहि र सत्य तरिकामा प्रदर्शन गर्न हो। र मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो प्लेटफर्ममा सहज व्यवसायिक अनुभवको तरीका हो। तसर्थ, यदि तपाईं पुनर्स्थापनाको लागि विशेष गरी अमेजन अपील सेवा भाँडा लिन चाहनुहुन्न भने यसलाई सबै हालतमा बेवास्ता गर्नुहोस्।
उच्च अर्डर दोष दर: ODR वा अर्डर दोष दर तपाईं द्वारा पठाइएको दोषपूर्ण अर्डरहरूको प्रतिशत हो। यो प्लेटफर्मको आँखामा गम्भीर अपराध हो। आदर्श रूपमा, अमेजनले मात्र ODR लाई अनुमति दिन्छ 1% भन्दा बढि। तसर्थ, यदि तपाइँ एक दोषपूर्ण उत्पादनको बारेमा कुनै गुनासो प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई समय भन्दा पहिले यसलाई सुधार गर्नुहुन्छ।
उच्च नकारात्मक ग्राहक अनुभव (NCX): ग्राहक समीक्षा तपाईको ग्राहकहरुलाई प्रदान गरेको सेवा को दर्पण हो। यदि तपाईं लगातार नराम्रो समीक्षा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्पादन गल्ती हो। यदि तपाइँलाई यो भइरहेको छ भने तुरुन्त कदम चाल्नुहोस्। आदर्श रूपमा, एक अमेजन अपील सेवाको रूपमा, हामी हाम्रो ग्राहकहरूलाई पनि त्यसो गर्न आग्रह गर्दछौं। तपाईको विक्रेता खाता हराउनु भन्दा तपाईले बेच्ने कुरा परिवर्तन गर्नु सजिलो छ।
यी विक्रेता निलम्बन पछि केहि सब भन्दा साधारण कारणहरू थिए। यदि तपाईलाई शंका छ कि तपाईको खाताले यस मध्ये कसैलाई पनि उल्ल inf्घन गर्न सक्छ भने ASAP यसको लागि जाँच गर्नुहोस्। यस बाहेक, धेरै जसो खाताहरू बहु कारणहरूको लागि निलम्बित हुन्छन्। यो समस्या निवारण गर्न गाह्रो हुन सक्छ तर सम्भव भएसम्म तपाईको अडिटलाई विस्तृत बनाउनुहोस्। र यसमा ASAP कार्य गर्नुहोस्, भविष्यको लागि निश्चित गर्न यो छोड्नाले तपाईंलाई स्ट्राइक लाग्न सक्छ। यो विगतमा हाम्रा केही ग्राहकहरूसँग भएको छ र यो तपाईंसँग पनि हुन सक्छ।
खाता निलम्बित? अब हामीलाई कल गर्नुहोस्!
कसरी हाम्रो अपील सेवा तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
जब अमेजन अपील सेवा को बारे मा कुरा गर्दै, अपील पत्र यसमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। अमेजन अपील पत्र तपाइँ र अमेजन को बीच एक मात्र संचार हो कि तपाइँको खाता पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो सही दिशा मा उत्रिएको छैन भने यो केहि समय लाग्न सक्छ। अनिवार्य रूपमा, यो कारण हो कि यति धेरै मानिसहरु एक अमेजन अपील सेवा भाडामा। जस्तै पहिले भनिएको छ, यो तपाइँको खाता पहिलो प्रयास मा पुनर्स्थापित गर्न को लागी सजिलो छ। अन्यथा, यो समय को एक सम्पूर्ण धेरै लिन सक्छ र अन्तमा तपाइँ ब्यापार को भार गुमाउन सक्नुहुन्छ।
अब, यदि हामी यस विषयमा थप कुरा गर्छौ भने एक अमेजन अपील पत्र मुख्य पकवान हो तर मूल घटक भनेको कार्य योजना हो। कार्यको योजना सही कदमहरू हो जुन हामी अमेजनद्वारा सूचित गरिएको मुद्दालाई सुधार्नका लागि लिनेछौं। त्यसो गर्न, हामी ध्यान दिन्छौं त्यहाँ केहि चीजहरू छन्:
अमेजनले पठाएको सूचना ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।
हातमा मुद्दाको बारेमा स्पष्ट विचार प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईंको खाता कसरी उल्ल .्घनमा छ।
अब आवश्यक चरणहरू सिर्जना गर्नुहोस्, कसरी तपाईं तिनीहरूलाई फिक्स गर्दै हुनुहुन्छ।
यो यो भन्दा धेरै विस्तृत छ तर ती चरणहरू मूल अवयवहरू हुन्। साथै, प्रत्येक पुनर्स्थापना अद्वितीय छ, त्यसैले, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि हामीले प्रत्येक र प्रत्येक पुनर्स्थापनामा फरक रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। जे होस्, यी संग हाम्रो अनुभव को लागी कुनै पनि अनुरोध ह्यान्डल गर्न को लागी सजिलो हुन्छ।
हाम्रो अमेजन निलम्बन अपील सेवाहरु अन्वेषण गर्नुहोस्
हामीले एक विशेष क्वेरीको लागि कार्यको योजना सिर्जना गरिसकेपछि, हामी एक अमेजन अपील पत्र लेख्न अघि बढ्छौं। यो अरू कुनै अक्षर जस्तै छ तर अलि फरक छ। सम्भव भएसम्म थोरैमा धेरै बोल्ने इरादा हो। र यसको शीर्ष मा, एक सानो संरचित हुन। त्यसकारण, तल हामीले अभ्यास गरिरहेका केही अभ्यासहरू यी छन्:
संक्षिप्त र सटीक: माथि उल्लेख गरिए अनुसार, "थोरै शब्दका साथ अधिक बोल्नुहोस्"। त्यहाँ धेरै अपीलहरू छन् कि अमेजन दैनिक आधारमा हुन्छ। तसर्थ, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि हामी सब थोकलाई सजिलो तरीकामा उल्लेख गर्दछौं। र यसलाई सजिलैसँग पढ्नको लागि प्रतिनिधिलाई छोटो पार्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कार्य योजना: किनकि हामी पहिले नै कार्य योजनाको साथ आएका छौं, अब यो राम्रोसँग व्याख्या गर्ने समय आएको छ। हामी बुलेट पोइन्ट्स को उपयोग गर्न को लागी कोशिश गर्छौं प्रभावकारिता बढाउनको लागि जब यो पत्र स्क्यान गर्न आउँछ। र यसको शीर्षमा, प्रत्येक बिन्दु हामीले के कदमहरू चाल्ने छौं भन्नेको स्पष्ट संकेत हो।
संरचना: प्रत्येक लिखित सामग्री कहानीको एक टुक्रा हो जसमा एउटा कथा रहेको छ। हामी यो भन्दैछौं किनकि कथन महत्त्वपूर्ण छ। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हामीले क्रमशः सबै कुरा उल्लेख गर्‍यौं र प्रत्येक र प्रत्येक मुद्दालाई एक गरेर एक गरेर यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दछौं।
घुसपैठ: पत्रको स्वर जाँचमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। एउटाले बुझ्नु पर्छ कि अमेजनमा बेच्ने क्षमता एक अवसर हो। यो विचार राख्दै, सम्पूर्ण पत्र निर्माण हुन्छ। यो बुझ्न आवश्यक छ कि यी नियम र नियमहरू विक्रेताको लागि आफैंमा लामो समयको लागि हो। यदि तपाईं इमान्दार मेहनती व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईंको जीवनलाई सही तरीकाले बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं किन बुझ्नुहुनेछ किनकि यो हुन्छ।
एक अमेजन अपील सेवाको रूपमा, हामी अपीलको निर्माणलाई गम्भीरताका साथ लिन्छौं। यो हाम्रो मुख्य जिम्मेवारि हो र हामी यसलाई धेरै व्यक्तिगत रूपमा लिन्छौं।
विक्रेता खाता को पुनर्स्थापना को लागी आदर्श समय
समयको साथ कुनै विशिष्टता छैन। प्रत्येक पुनर्स्थापना अघि उल्लेख गरिएको आफ्नै अर्थमा अद्वितीय छ। हामीले धेरै चोटि देख्यौं जब हाम्रो अपील पत्रले २ h घण्टा भित्र खाताहरू बहाल गरेको छ। जे होस्, यदि एक ग्राहक हामीसँग पुन: स्थापनाको लागि चिठी प्रयास गर्दै निजीमा आउँदैछ, पुनर्स्थापनाले केहि समय लिन सक्दछ। अमेजन अपीलको साथ, पहिलो पटकको आकर्षण, तसर्थ, निश्चित गर्नुहोस् कि अमेजन अपील पत्र पहिलो पटक आफ्नै लागि पर्याप्त छ।
भविष्यमा खाता निलम्बन बाट कसरी बच्ने?
यो गर्न सक्ने दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो प्रत्येक र सबै कुरा को बारे मा सक्रिय हुनु हो। दोस्रो अमेजन अपील सेवा भाँडामा लिनु हो। हामीलगायत धेरै सेवाहरू छन् जुन निलम्बन रोकथाम प्रदान गर्दछ। यसमा कुनै श doubt्का छैन कि एकैचोटि धेरै कर्तव्यहरू सम्हाल्न कष्टकर हुन सक्छ। यो कारण हो किन यति धेरै विक्रेताहरु आफ्नो विक्रेता खाता स्वास्थ्य को रखरखाव अमेजन अपील सेवाहरु लाई आउटसोर्स गर्छन्।
यदि तपाइँ कोहि हुनुहुन्छ जो एक अमेजन अपील सेवा को लागी देखीरहनुभएको छ भने शायद हामी मद्दत गर्न सक्छौं। हामी विक्रेता निलम्बन रोकथाम, नियमित खाता स्वास्थ्य जाँच, र बिक्री को बढावा जस्तै सेवाहरु प्रदान गर्दछौं। तेसैले, यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाइँको नि: शुल्क परामर्श प्राप्त गर्नुहोस् यहाँ क्लिक.